Tsy hitera-bokatsoa ho an’ny Firenena raha mbola mifono kajikajy politika | Ny Valosoa Vaovao
Tsy hitera-bokatsoa ho an’ny Firenena raha mbola mifono kajikajy politika
Taorian’ny resaka nifanaovan’ny filohan’ny Repoblika tamin’ny mpanao gazety tany Londres ny herinandro lasa teo momba ny mety hanovana ny lalàmpanorenana eto Madagasikara dia lasa nipoitra indray ireo politisiana efa nivoy ity fotokevitra ity tato ho ato. Mazava ho azy fa raha vao hikitika lalàmpanorenana dia tsy maintsy fitsapankevi-bahoaka no ho tanterahina ka izay iray halehany na mialohan’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena izany na aoriany. Ny lojika indrindra anefa dia mialohan’ny fifidianana ho filohan’ny Repoblika izany satria tsy maintsy hifanaraka amin’izany ny lalàna mifehy ny fifidianana azy. Ara-dalàna ihany koa ny tsy maintsy hananganana rafitra toy ny « Assemblée Constituante » hamolavola izay ho lalàmpanorenana. Ny tsapa sy iainana aloha hatramin’izao dia tsy nitondra fivoarana azo tsapain-tànana ho an’ny vahoaka malagasy sy fampandrosoana loatra ny Firenena teo amin’ny sehatra rehetra izay lalàmpanorenana nifandimby tao anatin’ny Repoblika IV. Tsy azo hodian-tsy hita kosa anefa fa raha ny zava-nisy sy niainana ary raha nahatapitra ny fepotoana niasany ny filoham-pirenen’ny Repoblika III-3 dia efa nivoatra be ny fiainam-pirenena. Porofon’izany dia vao naongana teo amin’ny fitondrana izy dia aman’hetsiny ny very asa satria nisintaka ny Agoa, tsy nisy intsony ny fanorenana orinasa vaovao izay afaka namorona asa hany ka mitombo izay tsy izy ny tanora tsy manana asa ankehitriny. Raha nitohy ihany koa ny famolavolana ka nampiharina ny programam-pirenena momba ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ny fanapariahana fitantanana ny asam-panjakana (Programme National de la Décentralisation et de la Déconcentration) dia ho foana ny fivangongoan’ny fahefana eto an-drenivohitra izay mampitaraina ny avy any amin’ny faritra izay mahatsiaro ho tany lavitr’andriana anjakan’ny toka-maso. Raha nizotra araka ny naminavinana azy ny « tohizo ny làlan-tsika » dia tsy ho tohy izao ny toetry ny làlam-pirenena sy ireo làlana mampifandray ny renivohitry ny faritra sy kaominina.
Satria novaina ny lalàmpanorenana nidirana amin’izao Repoblika IV izao, saingy « kopi kolé » amin’izay nisy any amin’ny firenen-kafa ka sady tsy nampiharina manontolo no tsy misy itovian’ny mpaka tahaka sy ny nalain-tahaka eo amin’ny sehatra sy ny lafiny rehetra hany ka nandamoaka sy niteraka fahalovana ary namoaka fofona mantsina tsy laitra iainana. Araka izany dia tsy izay mety any amin’ny firenen-kafa dia tsy maintsy hahomby ihany koa eto Madagasikara. Iaraha-mahalala fa Repoblika enina no najoro teto amin’ity Nosy ity tao anatin’izay fito ambidimampolo taona izay satria niova in-telo ny lalàmpanorenan’ny Repoblika III. Misy fitenenan’ny frantsay milaza hoe “jamais deux sans trois, le quatrième sera le bon” kanefa na ny firenena frantsay aza efa ao anatin’ny repoblika V nanomboka ny taona 1958 ka hatramin’izao fotoana izao. Ny Repoblika I teto Madagasikara koa dia nijoro ny 14 Oktobra 1958. Mety amin’ny frantsay izany ny lalàmpanorenan’ny repoblika V any aminy saingy tsy mety amin’ny fiarahamonina eto Madagasikara aloha ny lalàmpanorenana voalaza etsy ambony hatramin’izao. Ka lalàmpanorenana fahafito no hisy eto raha hisy tokoa ny fanovàna. Tsara ho marihana anefa fa na ho fanimpolony aza kanefa tsy hifanaraka amin’ny fotopisainana sy kolontsaina ary ny soatoavina maha malagasy ka mbola ny toetsainan’ny politisiana gasy: tia kely, matim-boninahitra, mambam-pahefana ka tsy mena-mivadika ary zary sakaizan’ny mpandresy mandrakariva dia azo antoka fa mbola ny omaly ihany ny anio sy ny ampitso. Tsy tena hihatra (effective) ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariahana ny fitantanana ny asam-panjakana rehefa tsy miankina amin’ny fanjakana foibe intsony ny fahefan’ny faritra ka hajoro ny faritra na faritany mizaka tena (région ou province autonôme) mifototra amin’ny fotopisainana sy kolontsaina ary soatoavina isam-paritra ary samy hanao izay hampiroborobo ny toekareny sy hampivoatra ny fiainan’ny mponina ao aminy avy amin’ny harena voajanahary misy ao aminy. Harena ny faha samihafana, fa tsy entina hampizarazarana. Ny fanjakana isian’ny fitsinjaram-pahefana tena izy no mety indrindra eto Madagasikara, izany hoe tsy federalisma toy ny tamin’ny taona 2002 nentina nampitoka-monina ny Faritanin’Antananarivo fa fanapariahana marina ny fahefana ananan’ny faritra tsirairay mamaritra ny tetikasa sy programan’asa mifanaraka amin’ny toe-draharaha sy ny toe-javatra misy any an-toerana.